Okusalungiswa, uhlelo lokusebenza ukuthatha amanothi owadingayo ku-iPhone yakho | Ngivela kwa-mac
Okusalungiswa, uhlelo lokusebenza ukuthatha amanothi owadingayo ku-iPhone yakho
Kunezinhlelo eziningi zokubhala amanothi ku-iPhone yethu noma i-iPad, kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo Amanothi i-native yase-iOS kuze kube Evernote ukudlula kwabanye abaningi kodwa Imihlahlandlela, Ukuhumusha kwakhe okungokoqobo "okusalungiswa", kuphethe uchungechunge oluphelele lwezimfihlo ezenza ukuthi, mhlawumbe, kube ukusetshenziswa okufanele kakhulu nokukhiqizayo kwamanothi nokusalungiswa, ikakhulukazi kulezo zikhathi lapho ukucindezela kucindezela khona.
Ama-Dratfs 4, ukukhiqiza ngokusemandleni
Okunye engikukhumbulayo ukuthi i-iPhone ne-iPad zingisebenzisela okungaphezulu kakhulu kokungcebeleka, ngibheka i-imeyili noma ngiseshela i-inthanethi. Uma lawa madivayisi avelela okuthile, kungenxa yokuthi aklanyelwe ukuthi sikwazi ukukhipha konke okwethu ukukhiqiza. Imihlahlandlela Kuvele kahle njengephuzu lokusekela lo mbono wokukhiqiza futhi, yize kuzoba wusizo ikakhulukazi kulabo basebenzisi abachitha amahora namahora nsuku zonke bebhala, iqiniso ukuthi lingasetshenziswa kakhulu njengezidingo zalo abasebenzisi.
Ngo-okthoba wokugcina Imihlahlandlela yalungiswa ngokuphelele yafinyelela kunguqulo yayo yesine futhi ingafaki nje kuphela i-interface evuselelwe kepha futhi nezici ezintsha nemisebenzi egcine ngokuyihlanganisa "njengohlaka olucacile".
Imihlahlandlela Kuyinto elingana kakhulu nephedi yendabuko nepeni, futhi i-raison d'être yayo ukunika amandla ukubhala okusalungiswa namanothi. Uma ngokuzumayo unombono, uyavula Imihlahlandlela futhi ngawo lowo mzuzu usukulungele ukwamukela amazwi akho, ngaphandle kokuthintwa okuqhubekayo, "Vula ubhale", ukuze umqondo ungaze uphunyuke kuwe. Kepha okungcono kakhulu ukuthi lo mbono ungaqhubeka nokuthuthuka uze ube uhlaka lombhalo ongabelana ngalo kamuva. Ngakho-ke Imihlahlandlela Ihlukahluka kakhulu, ngoba ilusizo ngokulinganayo kumfundi osanda kuba nombono wephrojekthi yenkosi yokugcina ayenzayo, kunentatheli elungiselela ukubhala i-athikili yosuku.
Ukuxhumana kwe Imihlahlandlela iyakhiqiza, futhi iyakhanga, izici ezimbili okumele zibe nazo eminyakeni yamathuluzi edijithali.
Okusalungiswa, vula ubhale
Umqondo ukuthi ungayithwebula imibono ngokushesha, kalula futhi ngaphandle kweziphazamiso ngakho-ke, njengalapho uvula iphedi ebonakalayo, lapho uvula Imihlahlandlela Into yokuqala ozoyithola yikhasi elingenalutho ongalibhala manje, kanye nochungechunge lwezinkinobho okuthi, yize ubekhona, zihambe zingabonwa ngokuphelele, zilusizo kulokho abakwenzayo kodwa futhi zilusizo kulokho abangakwenzi, okuphazamisa ukunakwa.
Imihlahlandlela Inemibala emithathu yesixhumi esibonakalayo sayo (emhlophe, emnyama ne-sepia), eguqulelwe ukuthanda komuntu ngamunye noma isimo. Okwamanje, zonke izenzo ongazenza zivela ngokuslayida umunwe wakho ukusuka kwesokudla kuye kwesobunxele, uhlobo lwekholomu noma iwindi elintantayo amathuba alo azokumangaza.
Ukusuka kule "kholomu eseceleni" ungakopisha umbhalo ebhodini lokunamathisela ukuze uwunamathisele komunye umbhalo noma kolunye uhlelo lokusebenza, uwuthumele nge-imeyili, ngomyalezo, wabelane ngenketho yendabuko "yokwabelana" ye-iOS, uvule kwezinye izinhlelo zokusebenza ezinjengezinombolo, iGoodReader , Amakhasi, Ukungaqiniseki, I-Dropbox, i-Google Drayivu, i-Evernote, njll., Ukuthekelisa ku-ICloud Drayivu, dala umcimbi kuKhalenda, dala Isikhumbuzi, uthumele ku-Twitter, ku-Facebook, ku-Google +, ugcine ngqo kuzinhlelo zokusebenza esesikhulume ngazo bese uphrinta. Imihlahlandlela kuyisiqu esikhulu samathuba emibhalo yakho, amanothi nokusalungiswa.
Kuyathakazelisa kakhulu futhi kuyasebenziseka futhi uhlamvu nesibali samagama esingabona engxenyeni engaphezulu kwesokudla sombhalo wethu, kuhle uma sibhala okuthile okudinga ukuhlenga kusandiso esithile.
Futhi ngaphansi kwekhibhodi, lapho uyifihla, uzobona izinketho zokwenza ngokwezifiso. Ngokucindezela i- «Aa» iwindi le- «Ukubukeka» livela lapho singakhetha khona esinye sezitayela ezintathu ezibalulwe ngenhla, uhlobo lwefonti, futhi singaqokomisa ngisho amalebula ezenhlalo, iMarkdown noma sishiye konke njengombhalo ocacile.
Okusalungiswa | Ukubukeka
Njengoba ngishilo ngaphambili, umqondo obalulekile we-Okusalungiswa ukudala umbhalo ngokushesha futhi kushesha, futhi ngalokhu akukho okungcono ukwedlula Isandiso obala ngakho iOS 8. Ngawo uzothatha umbhalo, uhlanzeke izithombe nokunye) kepha kufaka phakathi izixhumanisi, ukwazi ukuhlela ngendlela obona ngayo ngaphambi kokuyigcina, ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza ezenzayo.
Futhi, uma ubamba inkinobho "+", ungangenisa amafayela we-.txt noma noma yikuphi okuhlukile kweMarkdown okufana .md kusuka kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza olusebenza njengomhlinzeki wedokhumenti, njengeDropBox, ukuze ukwazi ukuyihlela ngokwakha okusha umbhalo, okungukuthi, owangempela uzohlala unjalo.
Ngale ndlela nge Imihlahlandlela ungangenisa noma yimuphi umqulu, uhlele futhi uwuthumele.
Kanye nakho konke esesikubonile ngamafuphi ngakho Imihlahlandlela, leli thuluzi linikeza amathuba amakhulu kakhulu. Kufinyeta, kubhekiswe ekhasini lalo lolwazi ku-App Store:
Ixhasa ukusetshenziswa kwanoma iyiphi ifonti efakwe kudivayisi ukuhlelwa.
Isici esithi "Hlela" sikuvumela ukuba uhlele kabusha imigqa nezigaba ngokuhudula nje bese uphonsa.
Umlando wenguqulo wamaphrojekthi akuvumela ukuthi uzulazule futhi uhlehlise izinguquko ngokubuyela kuzinguqulo zangaphambilini.
Ikhibhodi enwetshiwe eyenziwe ngezifiso ngokugcwele ngobuningi bezenzo ezilungele ukufaka ngqo kusuka enkombeni ye-Okusalungiswa.
Ukusesha okugcwele kombhalo.
Imodi Yokuxhumanisa yenza izinombolo zefoni, ama-imeyili, izixhumanisi nekheli olithwebule ngokusebenzisa isandiso.
I-mchos. Imihlahlandlela iyatholakala ku-App Store ngentengo engu- € 9,99 futhi iyahambisana ne- iPhone kanye ne-iPad ngakho-ke uma ufuna ukuyizama, ungakwenza ngqo kusuka kusixhumanisi engisishiya ngezansi noma ukuthola eminye imininingwane kusuka iwebhu yomdali wayo, Agile Ufudu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Okusalungiswa, uhlelo lokusebenza ukuthatha amanothi owadingayo ku-iPhone yakho
Ukuvela kokuqala ngemuva kokuzama i-Apple Watch
I-Apple Music: okuhle nokubi ngokuqhathaniswa neSpotify